Qofkii ugu horreeyay oo Coronavirus Ugu Dhintay Meel ka Baxsan Shiinaha | Radio Balcad
Home WARARKA MAANTA Qofkii ugu horreeyay oo Coronavirus Ugu Dhintay Meel ka Baxsan Shiinaha
Qofkii ugu horreeyay oo Coronavirus Ugu Dhintay Meel ka Baxsan Shiinaha
Nin ayaa waxa uu caabuqa coronavirus ugu Geriyooday Gudaha Waddanka Philippines, kiiskaas oo noqonaya midkii ugu horreeyay ee la xaqiijiyo ee ka dhaca meel ka baxsan waddanka Shiinaha.
Bukaanka oo 44 jir una dhashay Dalka Shiinaha ayaa waxa uu ka tagay magaalada Wuhan, ee gobolka Hubei, ee caabuqan uu ka soo bilowday.
Waxa uu u muuqanayay inuu caabuqu haleelay ka hor inta uusan gaarin Philippines, sida ay sheegtay Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO.
In ka badan 300 oo qof ayaa caabuqaasi u Geeriyootay tan iyo markii uu dilaacay, kuwaas oo intooda badan ku nool Gobolka Hubei, halka in ka badan 14,000 qof uu haatan caabuqu haleelay.
Dowladaha Mareykanka, Australia iyo dalal kale oo badan ayaa waxa ay dalkooda ka hor istaageen inay galaan ajaanibta ka imanaysa Shiinaha, sidoo kale waxa ay karantiilayaan Muwaadiniintooda markii ay dalkaas ka soo laabtaan.
Dhanka kale xukuumadda Shiinaha ayaa mar kale kordhisay fasaxa sanadka cusub ee Shiinaha si ay uga hortagto in dadka shaqooyinka ku laabanaya ay faafiyaan cudurkaan halista ah ee neef mareenka ku dhaca.
Waxaa ka sii horreeyay oo go’aan noocaas ah qaatay Wadamadda Ruushka, Japan, Pakistan iyo Talyaaniga.
Hase yeeshee mas’uuliyiinta hay’adaha caafimaadka adduunka ayaa diiddan xannibaadaasi.
Hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in tallaabada noocaasi ah ay caqabad ku noqon karto xogta ay wadaagaan dalalka, gaarsiinta dawooyinka iyo weliba kobaca dhaqaalaha.
Hay’adda WHO ayaa taa badelkeeda ku talinaysa in dadka lagu baaro xuduudaha. Waxa ay ka digtay in xannibaada ay dardar gelin karto faafidda xanuunka maadaama ay dadka socotada ah dalalkaasi ku geli karaan si aan rasmi ahayn.
Shiinaha ayaa sidaas oo kale dhaliilay xannibaada la saaray dadka dalkiisa ka safra, waxaana uu waddamada shisheeye ku eedeeyay inay iska indha tirayaan talooyinka mas’uuliyiinta caafimaadka.
Tirada rasmiga ah ee dadka u dhintay xanuunkan cusub ayaa hadda ah 304 qof.
Dhammaan dadkaasi ayaa ku geeriyooday gudaha Shiinaha, waxaana intooda badan 00 ah 294 qof ay ku dhinteen gobolka Hubei oo ah halka uu ka bilowday caabuqa.
Tiradda dadka hadda la ildaran xanuunka ayaa gaartay 14,380 qof sida ay warbaahinta Qaranka ee Shiinaha ka soo xigatay Guddiga Qaran ee caafimaadka.
Ku dhawaad 100 kiis oo kale ayaa lagu arkay meelo ka baxsan Shiinaha sida UK, Maraykanka, Ruushka iyo Jarmalka.
Previous articleAKHRISO”- Madaxa Xukuumadda Maamulka Galmudug oo soo Saaray Qoraal Digniin ah
Next articleAl-Shabaab oo Saakey Weeraray Deegaanka Qalimoow ee hoostaga Degmadda Balcad
DHAGAYSO:-Taliska Ciidanka Booliiska Gobalka Bari ee Maamulka Puntland oo Awaamiir Culus...